Nguva Mapepa Ari Kutengeswa mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva kumaTerm ePepa akanakisa Ari Kutengeswa mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Ungawana Sei Yemhando Pepa Pamhepo
Kana iwe uchida kutenga temu mapepa ekutengesa saka wauya kunzvimbo chaipo. Chinhu chekutanga chaunofanira kuita kuverenga kuburikidza neese aya matipi. Iwe unogona kushamisika nekureruka kwavanogona kuve.
Chinhu chimwe chete chakanak kuita kutarisa kumusoro makambani anopa akadai masevhisi online. Izvi zvinogona kuve zviwanikwa zvihombe zvekutsvaga mapepa emhando yepamusoro uye mamwe mabasa ekunyora. Iwe unozogona kuwana runyorwa rwemakambani akadaro nyore uye uchave nekugona kune akasiyana akasiyana sarudzo.
Chimwe chinhu chikuru chekutsvaga pamhepo ndeye dzakasiyana siyana sarudzo dzaungawana. Iwe unozogona kusarudza pakati pemhando dzakasiyana dzemapepa uye mamwe marudzi emasevhisi. Iwe unogona kutokwanisa kuwana mamwe masevhisi ayo anoenderana nemapepa etemu.
Mapepa etemu haasi evadzidzi vechikoro chepamusoro chete. Mazhinji acho aripo kubatsira vanhu vanoda basa kana vari kutsvaga basa. Kunyangwe iwe usiri kuda kutora makirasi kana kuita koreji mudzidzi, ivo vanogona vachiri kubatsira. Chinhu chimwe chete icho icho chinogona kutaurwa kune vanhu vari kutsvaga kutenga imba asi vasina kana chaiyo chivakwa parizvino.
Paunenge uchida kutenga mapepa epanguva yekutengesa online, zvinogara zvakanaka kuenda nekambani inopa rudzi urwu rutsigiro uye inozivikanwa. Kune makambani mazhinji anopa urwu rudzi rwekutsigira asi mamwe ari nani pane mamwe uye iwe uchazoda kuve nechokwadi kuti urikuita bhizinesi nemunhu ane ruzivo mundima iyi.
Chimwe chinhu chekufunga nezvacho ndechekuti kana iwe unowana chero mahedzisiro. Kune makambani mazhinji anopa madhora kana iwe ukatenga akawanda makopi kana huwandu hwakawanda hwemapepa saka iwe uchazoda kutarisa mune izvi usati wahodha chero chinhu.
Paunowana bepa kubva pawebhusaiti, rinofanirwa kuongororwa mukombuta kuti iwe ugone kuriona zvizere. Iwe unogona zvakare kuwana mawebhusaiti ayo anotendera iwe kupurinda mapepa ari muPDF fomati kuitira kuti iwe ugone kuva nawo iwo pakombuta yako usati waatumira iwo kukambani. Nenzira iyi, unogona kugara uchigadzirisa ruzivo kuti uone zvaunoda usati watumira.
Kana iwe uchida kutenga bepa pamhepo pamamwe mapepa mapepa, ita shuwa kuti unochengeta aya matipi mupfungwa. Iwe unozogona kutsvaga yemhando mapepa uye mamwe ekunyora masevhisi pamhepo.
Tarisa kambani inopa akasiyana mapepa sarudzo. Iwe haudi kuenda nerudzi rumwe chete nekuti kune akawanda marudzi akasiyana aunosarudza kubva uye ungazopedzisira waodha zvishoma pane zvaunoda. Zviri nani kuwana mhando dzinoverengeka kuti uve nechokwadi chekuti iwe unowana chaizvo izvo zvaunoda.
Ita shuwa kuti sarudzo dzepamhepo dzinotsigirwa newebhusaiti. Ita shuwa kuti vanopa dzakasiyana nzira dzakasiyana dzekuwana bepa uye usarega iyo webhusaiti pasi neimwe nzira.
Tarisa uone kuti webhusaiti yacho inotaridzika sei uye kuti inoratidzika sei. Kana iyo saiti isiri yehunyanzvi yekutarisa, hauzonzwa uine chivimbo mukutenga bepa kubva kwavari. Ita shuwa kuti saiti iri nyore kushandisa uye nyore kufamba nayo. Kana zvichitaridzika kunge zvakaoma, hauzodi kubata nazvo.
Tsvaga uchishandisa akasiyana mazwi. Iwe unofanirwa kuve unogadzira zvishoma kana iwe uchitsvaga aya mapepa nekuti anouya munzira dzakasiyana siyana uye iwe uchafanirwa kutsvaga iyo iine ruzivo iwe rwaunoda. Tarisa nzvimbo dzinopa dzakasiyana kiyi dzekutsvaga kutsvaga sarudzo kuti iwe ugone kudzikisira pasi zvaunogona kuita.
Sarudzo dzepamhepo dzichakwanisa kukupa pepa raunoda nekukurumidza. Iwe unozogona kutenga mapepa aunoda uye wozoapurinda kunze kana aendeswa.